Ukubonisa i-PCB, i-Flex-Rigid PCB, i-PCB INDIBANO- iPhiliFast
I-OEM ye-PCB ebiyelweyo kunye neNdibano
I-PCB kunye nePCBA
Jika ngokukhawuleza kwi-PCBA Prototype
I-Turnkey PCB yeNdibano
Inkonzo yeNdibano ye-SMT
Ubeko lwePCB kunye neClone
Womeleleyo PCB wokuvavanya ulwazi
Flex PCB wokuvavanya ulwazi
Ukulungisa kunye nokuGcina
Turnkey PCB & PCBA ukwenziwa kunye Assembly
Imizi-mveliso ye-elektroniki ye-PCB, i-SMT kunye ...
Turnkey Assembly PCB Ishicilelwe Pcb Cir ...
I-RF ye-microwave PCB eneFlash Gold Surface yokugqiba ...
bhetyebhetye pcb 6 Layer fpc Flexible-Rigid PCB man ...
Ukuprinta iiMveliso zeKhompyuter zeSekethe yePC ...
Pcb Multilayer Pcb prototype Pcb Pla Manufacter ...
Inkonzo yesekethe yebhodi yesekethe yokujika ...
ibhodi yepcb ekhokelwa ziibhodi zesekethe ze-pcb ma ...
Amakhulu abathengi anelisekile
I-PHILIFAST ngumvelisi webhodi yesekethe enikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo zebhodi yesekethe yokuvelisa. Njengendawo yokumisa i-PCB yokuvelisa kunye nomboneleli wenkonzo yebandla ngaphezulu kweminyaka elishumi yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwembali, Ngemigudu edibeneyo yabo bonke abasebenzi, i-PHILIFAST iphuhlise inkokeli yetekhnoloji yebhodi yesekethe eprintiweyo.
I-PHILIFAST ibonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu zohlobo lwe-BOM ngeenkonzo ze-BOM, inesixokelelwano esisebenzayo nesisebenza ngokufanelekileyo, kwaye iyaqonda ukuba indibano ye-PCB yexabiso eliphantsi kubathengi. Sineqela lobuchwephesha le-BOM lokujonga kwakhona idatha yoqobo ye-BOM yabathengi.
Inkqubo yemveliso yefektri iyahlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo, ixhotyiswe ngemveliso eyahlukeneyo kunye nezixhobo zovavanyo, amanyathelo alungileyo wombane, kunye novavanyo olupheleleyo lwekhompyuter, ezinokuthi zihlangabezane neemfuno zokuvelisa iimveliso ezichanekileyo zombane. Yiba nenkqubo epheleleyo kunye nesayensi yolawulo lomgangatho.
I-PHILIFAST ineqela lobuchwephesha lobuchwephesha be-PCB kunye neminyaka emininzi yamava asebenzayo. Ukubandakanyeka kwiinkalo ezahlukeneyo ze-elektroniki. I-PCB clone kukusebenzisa uphando olwenziweyo kunye nophuhliso lwetekhnoloji ukuphinda uhlalutye ibhodi yesekethe, kwaye ubuyisele iifayile zemveliso ye-PCB yoqobo, iibhili zezinto (i-BOM) zeefayile, iifayile zesikimu kunye nezinye iifayile zobugcisa, kunye neefayile zemveliso yesilika ye-PCB, kunye emva koko uphinde uzisebenzise.
I-PHILIFAST ayiboneleli kuphela abathengi ngento enye yokumisa i-PCB kunye neenkonzo zendibano, kodwa ikwabonelela abathengi ngeenkonzo zenkqubo ye-IC. Iqela lethu lobunjineli linokucwangcisa i-IC echongiweyo ngokweemfuno zabathengi. Abathengi banikezela ngolwazi olupheleleyo lokutsha, imiyalelo yokutsha, kunye neencwadi zezixhobo ezivuthayo.
Ngokwesiqhelo, emva kokuba ibhodi yesekethe ihlanganisiwe kwaye igqityiwe i-AOI kunye nokuhlolwa kokuvela, sihlala sicebisa umthengi ukuba abonelele ngendlela yovavanyo olupheleleyo lokwenza uvavanyo lokugqibela olusebenzayo kwibhodi egqityiweyo ngaphambi kokupakisha kunye nokuthumela yinkampani yethu. I-PHILIFAST ineqela lobuchule lovavanyo lwe-PCB (FCT). Uvavanyo olusebenzayo lusenza ukuba sifumane kwaye silungise ukungaphumeleli kwecandelo, ukusilela kwendibano okanye iingxaki zokuyila ngaphambi kokuthunyelwa, kwaye senze ukusombulula ingxaki ngokufanelekileyo kunye nokugcinwa.
I-Shenzhen Fhilifast Electronics Co., Ltd. ifunyenwe ngo-2005. Kwiminyaka engaphezu kwe-10 yophuhliso oluqhubekayo, inkampani iye yazisa izixhobo zemveliso eziphambili kakhulu, kwaye yasungula iqela lobunjineli lobuchwephesha, lafumana amava amaninzi emveliso kunye nolawulo ngexesha lokuvelisa. Inkampani yethu inenkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho, iseti epheleleyo yenkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo, kwaye iphumelele imveliso enkulu. Ikhava yabathengi bethu kurhwebo lwehlabathi, iimveliso eziphambili kunye neetekhnoloji zithunyelwa ngaphandle kwiimarike zaseYurophu naseMelika. Zonke iimveliso zithobela imigangatho ye-IPC kunye ne-UL.
Nciphisa iindleko zakho: I-Turnkey PCBA Assembly; Isisombululo se-BOM sokunciphisa iindleko; Ingcebiso ngezoBuchule kulwazi lwakho loyilo
√ UkuQinisekiswa koMgangatho: ISO14001, IATF16949, UL Certified; I-100% ye-AOI / yovavanyo lwe-E / iX-reyi / iNkqubo yokuSebenza kunye noVavanyo loMsebenzi ixhaswe
Service Inkonzo yabaThengi ngeyona ndlela: Iiyure ezingama-24 ezikwi-Intanethi; Impendulo yeXesha emva kweeNgxelo kwiiyure ezili-12; INkxaso kubuGcisa
• 2018 -Ukuvulwa kwe-Shenzhen PCBA kunye ne-Turnkey mveliso wokuvelisa.
• 2017 -Ukwandisa ishishini liye kumgca weemveliso ezi-5 ze-SMT.
• 2016-ISIQINISEKISO SE-ISO14001.
• 2015 -Ukuvulwa komzi mveliso wePCB eShenzhen.
• 2012 —— IATF16949, ISO13485, ISO9001, UL eqinisekisiweyo.
• 2008 -Ukuvulwa komzi-mveliso we-PCB eHenan.
• 2005 —— IPHILIFAST Electronics Ifunyenwe.
Ii-PCB ziyahambelana ne-ISO9001, TS16949, UL, CE kunye neSatifikethi seRoHS. Indibano ye-PCB SMT ehambelana ne-ISO9001, i-PDCA kunye ne-IPC-A-610E. Sisebenzela abathengi bethu kwihlabathi liphela. Inkqubo yethu ebanzi yolawulo lomgangatho iphucuke kakhulu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
• I-ISO9001: Ulawulo loMgangatho ka-2008
• 100% Uvavanyo olungenayo olwenziwe yi-IQC
• 100% Uvavanyo lwe-AOI
100% Uvavanyo lwe-E
Umgangatho we-IPCII kunye ne-IPCIII wokwamkelwa
UMNQOPHISO: Umsebenzi wethu kukubonelela ngenkonzo yokuvelisa elektroniki kunye nesisombululo sebhodi yesekethe esinexabiso eliphantsi ngomgangatho ophezulu kulowo nalowo umthengi wethu.
Sijongana namawaka abathengi rhoqo ngonyaka, siyayazi indlela yokubanceda abathengi bethu kakuhle:
• Umgangatho uqinisekisiwe
• Ixabiso eliphantsi lokujika isitshixo sePCB kunye nenkonzo yesiko yePCBA
• Akukho mfuneko ye-MOQ
• 99% ukwaneliseka kwabathengi
Umbuzo wasimahla weenjineli kunye nokuhlolwa kwe-DFM liqela leenjineli
Kutheni To Fumana PCB Yakho yoMvelisi In China
Yintoni efunekayo kwimveliso ye-PCB yakho
Inkqubo yePCB kunye nePCB
Ungayithoba njani indleko zakho zokwenza iPCB?
Ungaqala njani iodolo?
Nceda uthumele iifayile zakho ze-PCB Gerber, khetha kunye neefayile zeendawo / iifayile zeCentroid, ifayile ye-BOM kwi-imeyile yethu: sales@fljpcb.com
Inkampani yethu inenkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho, iseti epheleleyo yenkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo, kwaye iphumelele imveliso enkulu.
Lwedilesi: 203A / F2 Comprehensive Building A, Getailong Industrial Park, No. 227 Bulong Road, Bantian Street, Longgang District, 518129, Shenzhen, Guangdong, China
Ifowuni: +86 15302615374